As of Sun, 05 Jul, 2020 02:55
नेपाल बंगलादेश बैंक र साउथ एसिया फाउन्डेसन नेपालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
नेपालको ग्रामीण तथा बिपन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाहरूलाई सहज तथा सुलभ रूपमा कर्जा प्रदान गर्नका लागि नेपाल बंगलादेश बैंक एवं साउथ एसिया फाउन्डेशन नेपाल तथा साउथ एसिया फाउन्डेशनकाबीच बिहीबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको एकै साथ ६ नयाँ शाखा
सिद्धार्थ बैंकले बिहीबार संखुवाशभाको मकालु गाउँपालिका, रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका, सिन्धुलीको गोलन्जर गाउँपालिका, बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र पर्साको बहुदुरमाई नगरपालिकामा एकै साथ ६ वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको थप २ शाखारहित बैंकिङ सेवा
ग्लोबल आईएमई बैंकले बुधबारदेखि गुल्मी जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका–४, दिगाममा आफ्नो ६३ औँ तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका–४ वाड्लामा ६४ औ शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू गल्छी र मिर्चैयामा
बैंक अफ काठमाण्डूले आफ्नो सेवा तथा सुविधाहरूलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले ७६ औं शाखा कार्यालय गल्छी र ७७ औं शाखा कार्यालय मिर्चैयाको औपचारिक उद्घाटन गरेको जनाएको छ । गल्छी शाखा कार्यालय बिहीबार बैंकका सञ्चालक राधेश पन्त तथा गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठद्वारा उद्घाटन गरिएको छ ।
गुल्मीमा ग्लोबल आइएमईको २ शाखारहित बैंकिङ
ग्लोबल आइएमई बैंकले मंगलबारदेखि गुल्मी जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका वडा नं. ५, आँपचौरमा आफ्नो ६१ औं तथा सोही नगरपालिकाको वडा नं. ५, भुवाचिदीमा ६२ आँं शाखारहित बैकिङ सेवा सुरु गरेको छ ।
दुर्गममा बैंक पुगेनन्
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कैलालीका केही दुर्गम स्थानमा बैंकिङ सेवा सुरु हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूले प्रदेश ७ का ३६ वटा स्थानीय तहमा थप शाखा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेपनि कैलालीका दुर्गम स्थानीय तहमा भने बैंकिङ सेवा सुरु हुन नसकेको हो ।
ग्लोबल आइएमई बैंक बेलायतमा पनि
ग्लोबल आइएमई बैंकले आइतबारदेखि संयुक्त अधिराज्य बेलायतकोे एल्डरसर्टमा सम्र्पक र प्रतिनिधि कार्यालयको विधिवत सुरुवात गरेको छ । बैंकले नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकमध्ये पहिलोपटक बेलायतमा सम्पर्क कार्यालय बिस्तार गरेको हो ।
प्राइमको शाखा दशरथपुरमा
प्राइम कमर्सियल बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तारको क्रममा आइतबार सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिका ,दशरथपुरमा नयां शाखाको शुभारम्भ गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको चार नयाँ शाखा स्थापना
सिद्धार्थ बैंक आइतबार सुनसरीको गढि गाउँपालिका, काभ्रेको रोसी गाउँपालिका, रुपन्देहिको मर्चवारी गाउँपालिका र तनहुको देवघाट गाउँपालिकामा एकै साथ ४ वटा शाखा स्थापना गरेको छ ।
खातामा जुनसुकै बैंकका शाखाबाट पैसा जम्मा गर्न पाइने
अब जुनसुकै बैंकमा खाता भए पनि आफ्नो पैसा जम्मा गर्न त्यही बैंकको शाखामा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नजिकै भएको अर्को कुनै बैंकको शाखामार्फत पनि आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन गरेको छ।
कृषि विकास बैंकबाट ८ खर्ब ६९ अर्ब कर्जा प्रवाह
कृषि विकास बैंक लिमिटेडले आव २०७३-७४ मा २ अर्ब ५७ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले आइतबार स्थापनाको ५१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आव २०७३-७४ मा ४ अर्ब २३ करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन भएको जानकारी दियो ।
सहकारीलाई पुरानै कर
सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने कर घटाए पनि तत्कालका लागि पुरानै कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सहकारीभन्दा आयकर ऐनको व्यवस्था माथी भएकाले पनि ऐन संशोधन नभएसम्म कर नघट्ने भएको हो ।
एनआईसी एसियाको शाखा झापाको झिलझिलेमा
एनआईसी एसिया बैंकको नयाँ शाखा शिवसताक्षी नगरपालिका–८, झापामा खुलेको छ । झिलझिले शाखाको बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका हुन् ।
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको शाखा अब दाङमा
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शाखा दाङमा पनि विस्तार गरिने भएको छ । कम्पनीका दाङ जिल्ला वरिष्ठ सहायक बिष्णुकुमार देवकोटाले यो जानकारी दिएका हुन् ।
सिद्धार्थ बैंकको भाइबर बैंकिङ सेवा
सिद्घार्थ बैंकले प्रविधिमैत्री ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी भाइबर बैंकिङ सेवा प्रारम्भ गरेको छ । यस सेवामार्फत ग्राहकहरूले सहज रुपमा आफ्नो मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबलेट, कम्प्युटरलगायत अन्य विद्युतीय उपकरणबाट बैंकिङ सेवाबारे जानकारी लिन सक्ने जनाएको छ ।